I-20 yeelitha ezingama-20 zebhegi ethengisa ukutya kwibhokisi mveliso kunye nabathengisi Kaiguan
Thepha / Faucet
Ibanga lokutya le-LDPE cubitainer
I-20 litre bag yokuhlola ebhokisini
Ingxowa yokuzihlaziya esebhokisini sisiqulatho esitsha esidibanisa ukuguquguquka kweNgxowa kwiBhokisi kunye nezibonelelo eziphuculweyo zezikhongozeli eziqinileyo okanye ezingagungqiyo, ezenza ukuba ibe lolunye ugqibelele kuzo zonke ezi ndlela. Iqulethwe yicube eyenziwe ngetyhubhu, enemigangatho emininzi yeplastikhi, itephu, ikepusi okanye ivalve nebhokisi yekhadibhodi.
Ibhegi yethu yokuhlaziya ebhokisini yenziwe ngeplastikhi yeplastiki. Uluhlu lwangaphandle (i-polyamide + polyethylene) lukhusela kwioksijini kunye nokufuma; Ubuninzi bayo kunye nokwakheka kwayo kungahluka ngokuxhomekeke kwiimfuno zomthengi okanye imveliso. Uluhlu lwangaphakathi (i-polyethylene) luthambile kwaye luyamelana nokukrazuka.
Abahlaziyi basebenziseka ngcono kulwelo nolwelo olubonakalayo.
Ingasetyenziselwa ukutya kunye nezinto zesiselo, ezinje ngeesosi, iisosi, iviniga, ngenxa yeJapan, ubisi, ijusi, iwayini, ibhiya, njl.
Ingafaka indlu yeekhemikhali, kubandakanya izinto zokuncamathelisa, ezolimo, iisepha, ii-inki, izinto zokuthambisa, iipeyinti, ioyile, ipetroleum, ulwelo lwesichumiso, isinyibilikisi, isicoci, utywala, isibulali-zintsholongwane esine-asidi, isinyibilikisi, ijeli ye-ultrasound, ihematology reagent njl.
Izinto zokuthambisa kunye nezinto zokhathalelo lomntu, ezinjengokucoca, ishampu, isepha engamanzi, isixhobo sokuthambisa, izinto zokuthambisa zisebenza kakuhle kakhulu kwiingxowa ezilungiselela ifom.
Isikhongozeli silula kakhulu kwaye kulula ukusiphatha.
Imveliso ikhuselekile ekukhanyeni nasemoyeni, evumela ukuba igcine zonke iipropathi de ibe isetyenziswe ngokupheleleyo.
Uyilo lwayo olungenamthungo luvumela i-99% yolwelo ukuba lukhutshwe.
Ukuhamba kwemveliso kuqhelekile kwaye kuhlala kunjalo, kungabikho bubble zomoya okanye ukutshiza.
Ingxowa ihlala ingahambi ngokupheleleyo ngaphakathi kwebhokisi, ngaloo ndlela ithintela ikepusi ekuhambeni ngexesha lothutho.
Ukuncitshiswa okubonakalayo kosetyenziso lweplastiki xa kuthelekiswa nezikhongozeli eziqinileyo.
Ukunciphisa ivolumu yokupakisha, zombini xa ingenanto kwaye xa igcwele.
Ukonga okunokuqwalaselwa kwisithuba kunye nexabiso lokuhamba kunye nokusingqongileyo.
Ibhokisi yeCarton ivumela indawo enkulu kunxibelelwano lwegraphic.
Inkxaso yobugcisa kunye noyilo olwenziwe ngokwezifiso.
I-Cheertainer ayisiyo ibhokisi yakho ebhokisini. Inika abathengi uyilo lwephakheji olugqwesa ulwakhiwo lomqamelo ekuhanjisweni nasekusebenziseni. Iphuhlisiwe ukwenza imilo yebhokisi, i-Chearanter enelungelo elilodwa lomenzi yahlukile kuyilo nakukwakha kwayo. Yenziwe ngegussets esecaleni ethi "ifom-fit" kwisikhongozeli, i-Cheertainer ivumela ukuhanjiswa ngokukhululekileyo okupheleleyo.
Ibhokisi yenziwe ngokwesiko. Njengoko yenziwe ngekhadibhodi, onke amacala anokuprintwa, anika indawo enkulu yokunxibelelana kunye nentengiso.
Ineentlobo ezininzi zezinto zokumisa, ukuvalwa kunye nezivalo.
Egqithileyo I-BPA yasimahla yesikhongozeli samanzi esigaxwayo (ngeSpigot)
Okulandelayo: Isikhongozeli saManzi esiBunjiweyo sasimahla (esineSpigot)
ICubic Shape Cubitainer
I-Cubitainer Bag Kwibhokisi ye-Adblue
Ilitha ezi-5 zeebhegi ze-ultrasound